राप्रपा संगठन विभाग प्रमुख लिङदेन भन्छन्,–‘हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था मानेको भोलिपल्टै पार्टी एकता हुन्छ’ | Diyopost - ओझेलको खबर राप्रपा संगठन विभाग प्रमुख लिङदेन भन्छन्,–‘हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था मानेको भोलिपल्टै पार्टी एकता हुन्छ’ | Diyopost - ओझेलको खबर
राप्रपा संगठन विभाग प्रमुख लिङदेन भन्छन्,–‘हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था मानेको भोलिपल्टै पार्टी एकता हुन्छ’
Diyo post शनिबार, मंसिर ०१, २०७५ | ९:२९:००
कात्तिक २६ गते नै पार्टी एकीकरण हुने भनिएपनि राप्रपा लगायत पार्टीको एकीकरण भाँडियो । राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै राप्रपा र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाप्रति निक्कै आक्रोश व्यक्त गरे । राप्रपाले सबै आफ्नै हुनुपर्छ भनेपछि एकता प्रक्रिया भाँडिएको बुझिएको छ । दियोपोष्टले यसै विषयमा राप्रपाका संगठन विभाग प्रमुख राजेन्द्र लिङ्देनसँग कुराकानी गरेको छ ।
एकीकरण प्रक्रिया तपाईहरुकै कारण भाँडिएको हो ?
–हाम्रो कारणले एकीकरण भाडिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामका अन्य पार्टीहरुसमेतलाई एकीकृत बनाएर अघि बढ्ने भनेर हामीहरुले नै प्रस्ताव गरेका हौँ । हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष कमल थापाले नै यसको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । हामीले भाँडेको भन्दा पनि उहाँहरु नै सहमतिमा आउन नसक्नुभएको हो । समान विचार राख्ने अन्य शक्तिहरुसँग पनि मिलेर, सहकार्य गरेर जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता हामीले ठानेका छौँ ।
तपाईहरुकै कारण एकता प्रक्रिया रोकियो भनेर राप्रपा प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाले भन्नुभएको छ नी ?
–हाम्रै पार्टी राप्रपाको सक्रियतामा यो एकीकरण प्रक्रिया हाम्रै कारणले भाँडियो भन्न मिल्दैन । उहाँहरुले के भन्नुभयो, भन्ने कुराको जवाफदिईराख्नुपर्ने कुनै कारण म देख्दिन । तर के हो भने, संस्थापन पक्ष हुनाको नाताले आफू सरहको जिम्मेवारीमा काम गरौँ भनेर अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्ताव गर्दा एकीकरण प्रक्रिया कसले भाँडेको हुन्छ ? हिन्दु राष्ट्र, संवैधानिक राजसंस्था, र संघियता होईन सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको पक्षमा पार्टीलाई एक गराएर जौँ भनेर हामीले भनेका हौँ । सैद्धान्तिक रुपमा महाधिवेशनले जे निर्णय गरेको छ, त्यसलाई साझा मुद्धा बनाऔँ भनेका होँ । यहाँभन्दा हरु हामीले के भन्ने हो र ।
खासमा राप्रपा प्रजातान्त्रीक लगायत शक्तिले के कुरा मानिदिनुपर्ने हो र ?
–उहाँहरुले हिन्दु राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्थाको मुल मुद्धालाई स्वीकार गरेको भोलिपल्टै पार्टी एकीकरण हुन्छ । अन्यथा यो विषयमा उहाँहरु सहमत हुन सक्नुभएन भने, हामी नै पछाडी हट्छौँ । कम्युनिष्ट वा अरु पार्टीमा नलागेर छुट्टै पार्टी खोल्नु भनेकै हामीले यी मुद्धालाई संस्थागत गर्नु हो । यी मुद्धामा उहाँहरु सहमत हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
त्यसो भए, अब तपाईहरुको बीचमा मिल्न बाँकी विषय चैँ के के हुन् ?
–केही विषय बाहेक नेतृत्व लगायत विषयमा कुरा मिलिसकेको छ । कात्तिक २६ गते पार्टी एकीकरण गर्ने भनेर सबै तयारी पनि भएको हो । पार्टी एकताको घोषणा गर्ने भनेर सभागृह समेत बुक भैसकेको र प्रतिनिधिहरु तोकेर काम समेत अघि बढिसक्दा भाँडिएको हो । उहाँहरुले एकाएक आएर तयारी अझै पुगेन भन्नुभयो । त्यसैले एकीकरण रोकिएको हो । सैद्धान्तिक कुरामा उहाँहरुको बिमति आयो भने त, पार्टी एकता हुन सक्दैन, हामी नै ‘ब्याक’ हुन्छौँ । हामी नै ढोका बन्द भयो भन्दिन्छौँ ।
पर्टीको नाम, चुनाव चिन्ह र झण्डा राप्रपाकै राख्नुपर्छ भनेर तपाईहरुले लाद्ने प्रवृत्ती देखाउनुभएकै कारण एकता प्रक्रिया भाँडिएको रे नि त ?
– उहाँहरु र हामी सबै मिलेर नै खोलिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी सबैको साझा पार्टी हो । त्यतिबेलाको हामी सबै संस्थापकहरु हौँ । यो विषयमा कुनै छलफल गर्नु जरुरी नै छैन । मुल रुपमा पार्टीले सैद्धान्तिक रुपमा अंगिकार गरेका राजनीतिक मान्यताहरुलाई सर्वमान्य बनाउँ भन्ने नै हाम्रो कुरा हो । हिन्दुराष्ट्रको मुद्धालाई हामीले मानेर जान तयार भयौँ भने, हिन्दुत्वसँग गाँसिएको चुनाव चिन्ह गाईलाई नै मान्न के फरक पर्छ र ? यसलाई नमान्नुपर्ने उचित कारण आयो भने त, हामी पनि पछि हट्न तयार छौँ नी । भोलि महाधिवेशनले अस्वीकार गरेको खण्डमा हामी पनि मानौँला । तर, यस विषयमा बढि छलफल गरिरहनुपर्ने कुनै औचित्य म देख्दिन ।
यसरी लदाउन खोजियो भने, तपाईहरुको पार्टी एकीकृत होला ?
हामीले उहाँहरुलाई त्यस्तो लदाउने, बोकाउने अनि जबरजस्ती गराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । हामीले हिन्दुत्वको मुद्धालाई मुल मुद्धा बनाएका छौँ । राजतन्त्रको मुद्धालाई अघि बढाएका छौँ । यसैलाई सर्वमान्य बनाएर अघि बढौँ भनेका हौँ । यो भन्दा बाहिर गएर पार्टी एकता हुन सक्दैन ।
अन्त्यमा, देशमा हिन्दु धर्म मान्ने मात्रै नभई सबै धर्म मान्नेहरु छन् । कम्युनिष्ट पार्टी र कांग्रेसले पनि त्यसलाई मानेर देशमा धर्मनिरपेक्षता आईसक्यो । देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भैसक्यो । तपाईहरुको यस्ता मुद्धाले सार्थकता पाउला ?
–हामी त्यहि दृढ विश्वासका साथ अघि बढिरहेका छौँ । पार्टी एकीकृत गरेर नै यो मुद्धालाई थप बलियो बनाऔँ भनेर हामीले भनेका हौँ । यदि पार्टी एकता भएन भने पनि राप्रपा एक्लैले भए पनि यो मुद्धामा ससक्त ढंगले लडिरहनेछ । नेपालमा हिन्दु राष्ट्र पुनः स्थापनाको अभियानलाई सफल पार्छ ।
शनिबार, मंसिर ०१, २०७५ | ९:२९:००